Bethlehema: Nigidraka tanaty noely ny mpitondra fivavahana Armeniana sy Grika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2011 3:48 GMT
Tamin'ny Novambra 2008, ohatra, efa nifandona tao amin'ny Fiangonana Fasan'i Jesoa tao Jerusalem ny moanina Armeniana sy Grika.
Nilaza ny heviny i Lisa Shafer: Mpanoratra Bilaogy.
@pixie_pete: Ho lasa lalao olaimpika vaovao ve ny adin'ny relijiozy ao Bethlehema? […]
@TCoziLondon: Gidraky ny relijiozy mpifandrafy ao Bethlehema. Mampitokelaka mihitsy! […]
@metalvicar Rachel: ady faritra ilay izy…Mifandroaka sy mifanambany ny relijiozy’ BBC News – Gidraky ny Relijiozy ao Bethlehema […]
@meneedbeer: Relijiozy Grika sa Armeniana: iza no kinga kokoa amin'ny fanadivoana ny fiangonana? Fomba tokana ihany no ahafantarana izany- MIADY! […]
@AhmNoHere: “Tsy nisy ny nosamborina satria olon'Andriamanitra daholo ry zareo” WTF?!? […]
@Rohypgnosis: Fioo! Asa tsaran-dry zalahy fa difotry ny ‘Fitiavan'i Jesoa’ ry zalahy na TENA lasa masiaka ry zalahy 😀 […]
@nickjtaylor: Fiadanana indrindra ho ety ambonin'ny Tany: […] Antony hafa indray tsy andraisako ny fivavahana amim-pahamatorana.
Ny bolongan'i Fr Ray Blake kosa indray naka fotoana ieritreretana:
Na izany aza tsy gaga ny bolongana Fr Stephen Smuts:
Globalisering, christendom en het Midden-Oosten, kosa niezaka ny nitady lalindalina kokoa ny antony nahatonga ny fifandirana: